War Saxaafadeed ka soo baxay Midowga Yurub oo mar kale lagu soo dhoweeyey dowladda Soomaaliya
Midowga Yurub ayaa mar kale soo dhoweeyey miraha ka soo baxay shirkii Soomaalida uga socday Nairobi, gaar ahaan is fahamka ay abuureen hoggaamiyeyaasha iyo wadammada xubnaha ka ah IGAD, gaar ahaan sida ay u xalliyeen inay dhaqan geliyaan itijaah mid ah oo ku saleysan tanaasul siyaasadeed. Midowga Yurub, waxa uu u mahadnaqay dowladda Kenya taageerada dheeriga ah ee ay u fidisay shirka dib u heshiisiinta Soomaalida.
Midowga Yurub, waxa uu ku adkeynayaa dhammaan kooxaha inay ka dhabeeyaan go'aankooda la xiriira dib u heshiisiinta Soomaaliya, waxaana uu ku celiyey taageerada ay u hayaan maamulka federalka ee ku meel gaarka ah. Midowga Yurub, waxa uu rumeysan yahay in aasaaska Baarlamaanka federaalka ahi uu yahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hirgelinta nabad waarta, xasilooni iyo maamul dhexe oo ay yeelato Soomaaliya. Iyadoo laga ambaqaadayo taas, shaqo badan ayaa weli dhiman haddii lagu guuleysto ujeeddadan.
Midowga Yurub, waxa uu ka walaacsan yahay baahida loo qabo in dowladda federalka ku meel gaarka ahi aysan soo jiidan bulshada caalamka iyadoo eegaysa diyaar garawga loo diyaariyey, waxayna ku boorinayaan inay u isticmaalaan kalsoonidooda si kaabaysa ujeeddooyinka dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska.
Midowga Yurub, waxa uu diyaar u yahay inuu ka caawiyo dib u soo celinta ammaanka iyo dhismaha hay'adaha dowladda federalka ah ee ku meel gaarka ah. Waxaa intaa dheer in Midowga Yurub ka caawin doono maamulayaasha Soomaaliya inay hagaajiyaan nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliya.
iyo Afhayeenka dowladda FKMG oo sheegay inaan waxba ka jirin go'aankii Baarlamaanku ku riday xukuumaddii Geeddi.. Guji...